FIZAHAN-TANY ETO MADAGASIKARA : Niakatra 29 % noho ny filaminan’ny tontolo politika
Tafiditra ao anatin’ ireo sehatra mampidi-bola vahiny betsaka indrindra ho an’i Madagasikara ny fizahan-tany. 19 février 2020
Araka ny tatitra nataon’ny Ofisy Nasionaly misahana ny fizahan-tany eto Madagasikara (ONTM), efa azo tsapain-tanana sahady ny fiovana nentin’ny paikady nataon’ ny fitondram-panjaka hampiroboroboana ny sehatry ny fizahan-tany malagasy eto Madagasikara amin’izao fotoana izao.
Ohatra mivaingana amin’izany ny fisondrotan’ny tahan’ny mpizaha tany tonga nitsidika an’i Madagasikara tamin’ny 2019 izay nahatratra 378 000. Niakatra 29% mihoatra noho ny tamin’ny 2018 izany. Sambany tao anatin’ny folo taona lasa vao nahasarika mpizaha tany maro tahaka izany indray i Madagasikara. Tsy mijanona hatreo ny ezaka atao mba hampamiratra an’i Madagasikara fa tsy maintsy hotratrarina ny tanjona, hoy ny tompon’andraikitra. Fanambin’ny fitondram-panjakana mantsy ny hampiakatra io taha io hatrany amin’ny 500 000 ho an’ny taona 2023.
Ilaina ny fiarovana ny ain’ny mpizaha tany
Nanipika ny teo anivon’ny Ontm fa ilaina amin’ny fanatsarana ity sehatra ity ny fitoniana ara-politika sy ny fiarovana ny ain’ny mpizaha tany. Ireto farany no voalaza fa nampidina ny tahan’ny mpizaha tany tonga eto Madagasikara hatramin’izay. Tsy ampy ny fiarovana ny mpizaha tany any amin’ireo faritra mena nohon’ ny tsy fandriam-pahalemana nefa manana toerana maro mahasarika mpizaha tany. Raisina ohatra amin’izany iny Faritra atsimon’ny Nosy iny.
Re matetika ny fanafihana fiara mitondra mpizaha tany, hoy hatrany ny fanazavana, saingy tsy hita mazava izay fandraisana andraikitra ataon’ny voakasika. Mampitsoaka matanjaka ny mpizaha tany tonga mitsidika an’i Madagasikara koa ny fikorontanan’ny tontolo politika. Rehefa ity farany mantsy no mikorontana dia mikorosy fahana manaraka izay ny fiainam-pirenena ary any amin’ny sehatry ny fizahan-tany sy ny toekarena izany no mifatratra. « Nahazo vahana teto Madagasikara nanomboka tamin’ny taona 2019 lasa teo ny fitoniana ara-politika ka izany no nahatonga an’i Madagasikara nahazo mpizaha tany marobe. Raha te hanatratra ny tanjona : 500 000 mpizaha tany isika amin’ny taona 2023 dia tokony hotohizana hatrany ny fikatsahana izay fitoniana ara-politika izay », hoy ny fanazavana.